नेपालबाट एमसीसी सम्झौता फिर्ता भयो भने त्यसलाई चीनको जित हुने ; कतै एमसीसी विरुद्ध बिरोध गराउन पैसा परिचालन त भएको छैन ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Sep 14, 2021 #आर्थिक, #राजनीति, #समाजिक
तीन अंग्रेजी अक्षरको एउटा ‘सर्टकट’ शब्द अहिले ३ करोड नेपालीहरूको मुख–मुखमा झुण्डिएको छ– एमसीसी । अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको सांसदबाट पारित गर्ने तयारी भएसँगै यसको विरोधमा सडकदेखि सञ्जालसम्म कोलाहल मच्चाइएको छ । यद्यपि, विरोध गर्नेमध्ये कतिलाई एमसीसीको फुलफर्मसमेत थाहा नहोला, त्यो बेग्लै कुरा हो ।
२०११ देखि २०१७ सम्म आइपुग्दा अहिले मुलधारका सबै पार्टी र तीनका मुख्य नेताहरू एमसीसी सम्झौतामा कुनै न कुनै रूपले जोडिएका छन् । एमसीसी नेपालमा भित्र्याउने गृहकार्य
डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले शुरू ग¥यो । त्यसयता बनेका क्रमशः खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली,
पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारका पालामा एमसीसीमा केही न केही काम भएको छ । कुनै पनि सरकारले यो सम्झौता ठीक छैन भनेर पन्छाउन खोजेको पाइँदैन । त्यसैले अहिले आएर सम्झौतामाथि आधारभूत प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार उनीहरू कसैलाई छैन ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सीमा मौवाटारमा बीओपीको कार्यालय तयार हुँदै